Iiglavu zeBoxing Tattoos, intsingiselo kunye neengcamango | Ukwenza umvambo
Kusakhanya kodwa wena kunye ne-tracksuit yakho engwevu sele nihamba ezitratweni kwi-trot ekhanyayo, ubaleka elunxwemeni, ukhwela izinyuko ezizigidi, udiniwe, kodwa uyakwazi ukuthwesa isithsaba phezulu kwaye uphakamise iingalo zakho ngomoya woloyiso, kwaye zonke zine "Iso leTiger" ngasemva. Ukuba uziva uchongiwe ngokupheleleyo, iitattoos zeglavu zebhokisi yenzelwe wena.
Kodwa ayingoRocky kuphela ophila umlandeli we tattoo, kuba iigloves zegloves tattoos zifanekisela ezinye izinto zobuqu ngakumbi. Ngesi sizathu silungiselele eli nqaku lithetha ngentsingiselo yalo kwaye, kwakhona, sikunika izimvo ezininzi zokukukhuthaza. Kwaye ukuba uziva ngathi ngaphezulu, ungalibali ukuba ujonge kweli nqaku elinye malunga I-tattoos yebhokisi ngeyona ndlela icocekileyo isikolo esidala!
1 Intsingiselo yeetattoos zeglavu zebhokisi
1.1 Uthando lwamanqindi
1.2 Isilumkiso kwabanye
1.4 Khawuxhome iiglavu
2 Iiglavu zeBoxing Iingcamango zeTattoo
2.1 Iiglavu ezinebinzana esifubeni
2.2 Iiglavu ezibomvu, amandla amakhulu
2.3 Ubuhle beeglavu zokwenyani
2.4 Iiglavu zamanqindi zemveli tattoo
2.5 Imbethi manqindi yemveli
2.6 Iiglavu zokuhlonipha umntu
2.7 Iiglavu zebhokisi ezintle kakhulu tattoo
3 Imifanekiso ye-Boxing Gloves Tattoos
Intsingiselo yeetattoos zeglavu zebhokisi
IiTattoos apho i-protagonist i-boxing iglavu zineentsingiselo ezimbalwa ezinokwenzeka, ezinye zicace ngakumbi kunabanye. Umzekelo:
Ngaphandle kwamathandabuzo, intsingiselo enokuthi ifike ngokulula engqondweni kukubonisa uthando lwethu ngalo mdlalo ngeeglavu, eyona nxalenye ingumfuziselo weyunifomu yabo. Kule meko, nangona i-tattoo ingenayo intsingiselo efihliweyo kwaye iyimfihlo, ezinye izinto zinokusetyenziswa eziguqula iiglavu zibe yinto eninzi kakhulu. Umzekelo, ikopi yokwenyani yeeglavu zethu inokwenziwa.
Enye yeentsingiselo ezidumileyo zeeglavu kukuba zinokusebenza njengesilumkiso. Ngokungathandabuzekiyo, umdlalo wamanqindi ngumdlalo onzima kakhulu kunye nobundlobongela obuphezulu, ngoko ke, ukugqoka iiglavu ze tattoo kunokutolikwa njengendlela yokumemeza kwihlabathi ukuba ndiqaphele ukuba ndidibanise nawe, kuba uya kubuyisela.
Iiglavu zamanqindi nazo Zisenokuba sisikweko somlo ekuye kwafuneka siwuphumeze. Ngokuqhelekileyo le tattoo ibonisa imizabalazo ebalulekileyo, njengesigulo esithile ukuba umntu ofakwe kwi-tattoo kufuneka ajamelane nayo. Iiglavu zamanqindi zibonisa umlo ongaguqukiyo, wokuxhathisa, kunye noloyiso, uloyiso olunzima.
Ekugqibeleni, I tattoo yeeglavu zebhokisi eneglavu ezijingayo zinokuthetha nokuba sishiye into ecaleni okanye sithathe umhlala phantsi.. Ngokuqhelekileyo ibhekisa kumdlalo, kodwa nomsebenzi okanye ubugcisa. Into yokuba ziziiglavu zamanqindi ibonisa ukuba sisebenze nzima ngoku kufuneka siphumle.
Iiglavu zeBoxing Iingcamango zeTattoo
Nangona i-gloves yebhokisi elula, inyaniso kukuba le tattoo ihamba ngendlela ende kwaye iguquguquka ngakumbi kunokuba ivakala. Umzekelo, njengoko siza kubona ngezantsi:
Iiglavu ezinebinzana esifubeni
Kuphela abo bafuna ukutsala ingqalelo phezulu kunye ne tattoo yabo yeglavu - indawo efanelekileyo yokuya kwi-design enkulu, ekhangele amehlo isifuba., apho, ukongeza, sinokuhamba kunye noyilo oluphambili lweeglavu kunye nebinzana elipholileyo nelide, ekubeni indawo ihamba kakhulu. Yinike ubucukubhede ngokusebenzisa ibinzana lesiLatini.
Iiglavu ezibomvu, amandla amakhulu
Ngokuqinisekileyo, Phakathi kwayo yonke imidwebo ye tattoo ebonisa iiglavu zebhokisi, uya kubona umbala ofanayo ngokuphindaphindiweyo, obomvu. Oku akukona nje kuphela ngenxa yokuba iiglavu zalo mdlalo ziphantse zifumaneke ngombala omnyama okanye obomvu, kodwa nangenxa yokuba lo mbala uhambelana nobudlova kunye nothando, okwenza kube ngumlingiswa ofanelekileyo wolu hlobo lwe tattoos.
Ubuhle beeglavu zokwenyani
Kulabo bafuna tattoo ebonisa ngokucacileyo ukubonakala kweeglavu zebhokisi, akukho nto efana neeglavu ezingokoqobo. Fumana igcisa eligqwesileyo kwesi sitayile ukuze bakwazi ukuvelisa eluswini lwakho zonke iifolda, ukunxiba kunye nokubonakala kweeglavu zakho. Ungaya kuyilo olumnyama nomhlophe ukuba ufuna ukunika idrama ngakumbi.
Iiglavu zamanqindi zemveli tattoo
Isitayile semveli sijongeka silungile ngeeglavu zamanqindi. Ngapha koko, lo mdlalo unokuba ngowokuqala ukubonakaliswa njengoomatiloshe abakrwada kunye neebhadi ezahlukeneyo. Imigca eshinyeneyo kunye nemibala eqaqambileyo (kwakhona, ebomvu njengomlingisi ophambili), kunye noyilo olulula, lufanelekile ukuhambisa imbali yezemidlalo, kwaye ihambelana nezinye iitattoos zesi simbo onokuthi ube nazo.
Imbethi manqindi yemveli
Kwaye asisuki kude nesitayile semveli, kuba iimbethi manqindi nazo zikhangeleka zintle ngayo. Unokukhetha imbethi manqindi enxibe iimpahla zakudala kunye neenwele. Unokuba yintsusa ngakumbi kwaye ukhethe ezinye iimotifs eziqhelekileyo zesi sitayile kwaye ufake iigloves zebhokisi, umzekelo, iimermaids, iminenga, iikhangaroos, oomatiloshe, iihagu, imiqhagi ...
Iiglavu zokuhlonipha umntu
Ukuba into oyifunayo kukubonisa ukuba umntu osondeleyo kakhulu uqalise ukulwa, khetha iiglavu zebhokisi kwaye, umzekelo, igama labo. Ukuba awufuni ukucaca kangako, unokukhetha kwakhona into eqhelekileyo yaloo mntu kwaye wongeze iiglavu kuyilo, umzekelo, ukuba uthanda iirozi ungazidibanisa. Khumbula ukuba umzobi we tattoo unokukunceda kakhulu ukudibanisa izinto ezahlukeneyo ukuze uyilo lubukeke luhle.
Iiglavu zebhokisi ezintle kakhulu tattoo
Akuyomfuneko ukuba siyilibale loo nto iiglavu zamanqindi ziguquguquka kakhulu, yiyo loo nto sigqibele ngoluyilo luhle nge-boxing walrus. kwabo bafuna ukuphefumlelwa ngoyilo olunomtsalane ngakumbi kunye nolukhanyayo lwe tattoo yabo elandelayo. Kwisitayile sekhathuni, imibala kufuneka iqaqambe kwaye imigca ibe mncinci.
Siyathemba ukuba eli nqaku kwi-tattoos yeglavu yebhokisi likuphefumlele ukuba ufumane tattoo yakho elandelayo. Sixelele, ingaba unayo itattoo efana nale? Ithetha ntoni kuwe? Injani? Ukongeza, sikushiya igalari yemifanekiso engezantsi ukugqiba ukukukhuthaza!
Imifanekiso ye-Boxing Gloves Tattoos
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Izinto kunye neeTattoos zezinto » Iiglavu zebhokisi iitattoos, intsingiselo kunye neengcamango